Fotoam-pahavaratra :: Tsy mampiraika ny mponina eny amin’ ny faritra iva ny fiakaran’ny rano • AoRaha
Tsy taitra. Toa tsy miraika amin’ny mety ho fiakaran’ny rano mandritra ny fotoam-pahavaratra ny ankamaroan’ny mponina amin’ny faritra iva eto an-drenivohitra. Vao nanomboka nirotsaka anefa ny orana tao anatin’ny andro vitsivitsy dia efa maro ireo faritra dibo-drano. Tsy miova fa saika ireo toerana nahitana rano miakatra hatramin’izay ihany no dibo-drano.
“Efa mahazatra anay ny fiakaran’ny rano. Inona moa no azo atao eo fa rehefa miakatra ny rano dia miala amin’ny trano fa raha mbola azo iafiana dia mijanona ao an-trano ihany. Tsy hita mihitsy izay vahaolana fa toy ny isan-taona ihany ny zava-miseho”, hoy ny renim-pianakaviana iray monina eny Ankasina.
Etsy an-kilany, nilaza ny teo anivon’ny fokontany fa efa misy ny fiomanana mialoha, toy ny fanadiovana ny lakandrano saingy tsy maharaka raha vao betsaka ny ranon’orana.
“Efa miomana an’izany fotoam-pahavaratra izany ny fokontany satria faritra mora tondraka ny ety aminay. Fanadiovana ny lakandrano hivarinan’ny rano no asa natao voalohany mba tsy hijanona ny fako sy ny loto. Miandrandra ny fahavitan’ny lakandrano C3 izahay satria raha vita io dia ho afaka tanteraka ny tondra-drano. Avy amin’io fotodrafitrasa io ny olana. Midina aty aminay avokoa ny rano avy any ambony rehetra any ka rehefa avy maharitraritra ny orana na indray andro fotsiny aza dia miparitaka”, araka ny fanampim-panazavan-dRanaivoarivony Jaoson, filoham-pokontony, etsy Ankasina.
Marihina fa mbola tsy manomboka ny asa fanamboarana ny lakandrano C3.
Efa tsy mahagaga ihany koa ny ny fiangonan-drano eny amin’ny arabe. Anisan’izany ohatra ny eny Anosy, Mahamasina, Besarety, Andravoahangy ambany, Isotry, Ampefiloha. Betsaka ireo nihevitra fa tsy hisy intsony ny tondra-drano eto an-drenivohitra, taorian’ireny fanamboaran-dalana tetsy sy teroa ireny. Tsy maharaka ny fivoahan’ireo rano miangona noho ireo fako be manentsina ny tatatra.
Fanadihadiana isan-tokantrano :: Mbola andrasana ny vokatra tena ofisialin’ny fanisam-bahoaka